देशकाे पहिलाे डिजिटल मालपोत कार्यालयकाे सेवा प्रवाह कस्ताे छ? – Hotpati Media
देशकाे पहिलाे डिजिटल मालपोत कार्यालयकाे सेवा प्रवाह कस्ताे छ?
२२ कार्तिक २०७६, शुक्रबार ०७:३६ मा प्रकाशित (8 महिना अघि) अनुमानित पढ्ने समय : ३ मिनेट
काठमाडौँ – कलङ्की मालपोत देशको पहिलो डिजिटल मालपोत कार्यालय हो । गएको असारमा प्रधानमन्त्रीले नमुना मालपोत कार्यालयका रूपमा यसको उद्घाटन गरेका थिए ।
“त्यसैभित्र सम्पूर्ण प्रणाली व्यवस्थित गरिएको छ । एक ठाउँबाट प्रवेश भएको फाइलको सम्पूर्ण काम त्यही ठाउँमा पूरा हुन्छ,” अधिकृत कमल कार्कीले भने ।
नमुना मालपोतको अवधारणा आएपछि ल्याइएको एकद्वार सेवालाई सेवाग्राहीले पनि मन पराएका छन् ।
“पहिलेजस्तो सानो रुजुका लागि अर्कोअर्को कोठा र कर्मचारी खोज्दै हिँड्नुपर्दैन,” एक आफन्तको जग्गाको काम लिएर मालपोत कार्यालय आउनुभएका कमल सुवेदीले भने ।
एउटै फाँटबाट सम्पूर्ण सेवा पाउने भएपछि तुलनात्मक रूपमा कम समयमा काम हुने गरेको सेवाग्राहीको प्रतिक्रिया थियो ।
सेवाग्राही आफैँ सचेत हुनुपर्ने बताउँदै उनले भने, “हामी नागरिक बडापत्र पढेर सेवाबारे जानकारी लिएर आउँछौँ । त्योअनुसार नभए सम्बन्धित निकायमा गुनासो गरिहाल्छौँ । त्यसो भएमा बिचौलियाबाट काम लिनुपर्ने वा ढिलासुस्ती हुने सम्भावना कम हुन्छ ।”